Maitiro Ekukanda Anofurira, Blogger, kana Mutori wenhau | Martech Zone
China, August 13, 2020 China, Kukadzi 25, 2021 Douglas Karr
Munguva yakapfuura, ini ndanyora nezve sei KUTI kumisa blogger. Iyo saga inoenderera apo ini ndichiwana rukova rusingagumi rwevasina kugadzirira hukama hweveruzhinji vasina ruzivo rwandinoda kusimudzira zvigadzirwa zvevatengi kana masevhisi.
Zvakatora chinguva kuti unyatso tora iyo tangi yaikodzera kuratidzwa. Ini ndakagamuchira email kubva kune yemagariro midhiya strategist ne Supercool Kugadzira. Supercool isangano rekugadzira rinogadzira online vhidhiyo yekugadzira uye kugadzira, kushambadzira kwehutachiona, vhidhiyo seeding, inosanganisirwa yemagariro midhiya emakampeni, mavhidhiyo ehutachiona, anozivikanwa maratidziro uye mawebhusaiti. Iyi iemail isinganzwisisike!
Zvimiro zveGreat Blog Pitch
Nzvimbo yacho yaive munhu zvichienderana. Ini ndinowanzo gamuchira gumbeze rakatemwa nekunamatira. Ini ndinodzima iwo mapango ipapo ipapo. Kana iwe usingakwanise kudzidza zvandiri, sei ndichifanira kukuteerera?
Iyo nzvimbo muchidimbu anondiudza ruzivo. Vazhinji PR vanhu vanongocheka nekunamatira isinganetsi midhiya kuburitswa mumuviri weemail.
Iyo paki inondipa ine dzokorora kupinda zvakananga mune yangu blog positi!
Iyo pani inosanganisira yekubatanidza kune iyo chaiyo nyaya (uye kwandinogona kunongedzera uye kunongedza vashanyi vangu ku).
Iyo nzvimbo inondiudza nenzira dzakasiyana Ini ndaigona kushandisa iyo ruzivo! Apa ndipo pandakatanga kuyerera misodzi… ndichinhuwidza. Fungidzira kuti… kundichengetera nguva, Darci anga atofunga nezve maitiro andingaite pane ruzivo… uye anowedzera katsamba kuti ndimubate kana ndine mibvunzo.
Iyo sosi inopa kumashure pane iyo nyanzvi uye nei akakosha zvakakwana kuteerera.
Nzvimbo yacho inovhara neyaDarci zita chairo, zita, uye kambani (iyo ini kunyange akatarisa mudenga!)
Nzvimbo yacho ine kubuda! PR vanhu vanowanzo tumira kucheka uye kunama maemail kunze kweAptlook - yakananga kutyorwa kweCAN-SPAM chiito.
Iyi email iri padhuze-neperera… ndinogona kuyera iyo yakasimba B +. Chidimbu chidiki cheruzivo chisipo kusvetuka kwandisingafunge kuti vanhu vazhinji vePR vangatarisira kutora - asi zvaive zvakanaka kunzwa kuti nei zvaizove zvakakosha kune vateereri vangu. Mazwi mashoma akapusa muemail senge
Ndakaona Martech Zone akataura nezve vhidhiyo nesocial media munguva yakapfuura, saka ndakafunga kuti izvi zvinokufadza…
Tags: blogger panihow to pitchmaitiro ekumisa bloggermaitiro ekumisa mutori wenhaumaitiro ekumisa anopesvedzeramutori wenhaupitchpitch influencersupercool kugadzirasupercoolcreative
Jun 16, 2011 pa7: 44AM
Ndatenda nekugovana izvi - zvinonakidza kwazvo. Semumwe munhu anogara paPR fenzi, uye seblogga pachangu (kunyangwe zvisina kukosha zvakakwana kuti dzikiswe!), Zvinobatsira kwazvo kuona mhando yemapango anoshanda. Mukana wakanaka wekudzidza, saka maita basa!
Chinhu chimwe chete chandiri kushamiswa nacho kunyangwe iri poindi 5. Ini ndinomhanya diki asi inoshanda PR / Kushambadzira timu sebasa rangu rezuva, uye apo neapo ndinogamuchira iyi mhando yeturu (uye kashoma, ita ivo zvakare).
Mumakomba andakagadzira, handisati ndambobatanidza iyo mhando yeruzivo irimo mundima yechishanu, nekuti ndinofungidzira kuti vanhu vandakadzika vanogona kuzvifungira zvinhu izvi - uye handidi kuvaudza kuti sei kuti vaite mabasa avo (zvakaenzana ndinotsamwa zvishoma kana vanhu vakandiitira izvozvo).
Nekudaro, yako posvo iri kundiita kuti ndiongorore zvakare chinzvimbo icho!
Ini ndinobvumirana zvachose nezve kuita zvemunhu kunyange - zvakanyanya kukosha kunyanya tichifunga nezve hyperconnected hunhu hweiyo 'yemazuva ano' yekutaurirana basa.
Saka, ndatenda zvakare!
Ndiri kutora maonero anopokana pano. Chii mune heck vhidhiyo yezvematongerwo enyika uye zvematongerwo enyika kushambadzira zvine chekuita newe kana iyo Yekushambadzira Tech blog? # 1 its not "personalized" chokwadi chine zita rako mukati asi ndiani asingakwanise kuwana icho uye ave nacho auto kupinza muemail (ini ndinofunga aimbove mushandirwi wako akanaka pane izvozvo) # 5 Ini ndinobvumirana neye interacter zvachose nezve kusaisa iyo info mukati, iwe unofanirwa kuziva nzira yakanakisa yekushandisa iyo info kune vateereri vako asi chinongedzo kune tweet izano rakanaka. Chaizvoizvo nekuda kwekuti mazhinji mamwe maPR emiti anoyamwa haagadzire izvi zvakanaka, zvinongoita kuti zvinyanye kuseka kupfuura vamwe. Iyi piki yaizoshumirwa zvirinani kuenda kune mumwe munhu munzvimbo yezvematongerwo enyika mumaonero angu.
Semunhu parutivi chero munhu anozvitengesa sehutachiona chero chinhu anorasikirwa nekuvimbika neni (asi pamwe anowana kutsvaga uye maziso eziso rekushandisa iro izwi)
Zvematongerwo enyika uye kushambadzira zvakabatana, Chris. Ini ndaizopokana kuti kwaive kushambadzira kwakaisa Obama muhofisi. 'Mushandirapamwe' wake wetariro uye shanduko wakadyiwa nevavhoti. Mashandisiro ake evateveri uye vanokurudzira aishamisa, zvechokwadi huswa hwemidzi kufamba. RE: # 1, ini ndinobvumirana newe. Pfungwa yangu yaive yekuti Darci akanyatso kuuya kuzotitarisa tisati tapomba… chimwe chinhu chakanyanya batch uye blast PR mafemu haaite.
Gumiguru 16, 2014 na7: 22 PM
Doug, iwe ungakurudzira sei mumwe munhu kuti agadzire yekubuda-yekubatanidza yeemail kana yakanyorerwa munhu mumwe chete (blogger kana mutori wenhau) uye yakatumirwa kune iyeyeye munhu uye haina kubatana kune runyorwa mune yeemail kushambadzira chikuva?
Vazhinji vari pamutemo PR vanhu havatumire mashoma emaema pitches saka ini handizive kuti sarudzo-yekubuda yaizoita sei. Zviripachena, kana kambani ikunyorera iwe kumaimeri ayo ekushambadzira (pasina sarudzo yako), iri imwe nyaya.
Gumiguru 16, 2014 na7: 53 PM
Mhoro Carri! Chaizvoizvo vazhinji vevamiriri vePR vanotumira akawanda maemail. Mazhinji emapuratifomu ePR anobvumidza iwe kusarudza vese vatapi venhau vako uye mabloggi uye wotumira. Vamwe, saMeltwater (anotsigira) vane Unsubscript maficha papuratifomu yavo asi mazhinji evamwe havana. Kana iwe usina hukama hwebhizinesi, iwe unonyatsoda chirongwa chinozoisa iyo yekubuda. Outlook uye Gmail chete usazvicheka. Ini ndinofunga imwe nzira ingangove yekushandisa chishandiso seFormstack uye ingoita kuti vanhu vazadze fomu (kana Google Fomu paspredishiti)… asi izvo zvakaoma kuteedzera.